Hari & Planters
Linshu Yimeng Qingliu Craftwork Co., Ltd locates muna Linyi guta, apo riri inozivikanwa kuti ari hometwon vachena wakagadzirwa nembariro. Somunhu guru-scaled gadzira, tinogona kupa nekuve the willow zvinhu pamwe kusimba zvakagadzirwa uye wakanaka unhu.
Hwakagadzwa muna 2001. gumi gore vave vachiona kukurumidza kukura fekitari yedu. Pokugara 20000 sikweya metres nyika, tinoshandisa vanenge 500 vashandi sezvo mugadziri yedu vokutanga, vose vari spealized mu interweaving kwenguva refu nhoroondo, mabasa avo vakawana mukurumbira zvikuru zvose musha uye kunze.
Somunhu nyanzvi ekisipota, tine ruzivo yakaringana kwekurasira the willow handicrafts, kusvikira nhasi, takavaka bhizimisi ukama munyika dzakawanda pasi rose, kunyanya mu Europe, North America uye zvichingodaro, uye akahwina rakaisvonaka chikwereti kubva makasitoma edu.
Quality uye vatengi ndiyo musimboti redu.
Production chichange kurongwa maererano mufananidzo wako, rondedzero kana wako mharidzo. Kamwe iwe dzinotipa chimedu zvakagadzirwa bepa, yakanaka nebasa Denga nenyika tinogona kuvaka kwamuri.
nguva Chero Pakubvunza kwako kuti kunzwisiswa.
KODZERO AT HOME: Holiday Decor inopa zvinozipa ...